Inkqubo enkulu yejaji, isiko lamazwe akhuluma isiNgesi, yasungulwa e-US ngesihlomelo sesihlanu kuMgaqo-siseko. Yinto yokuqulunqwa kwe-Anglo-Saxon okanye i-Norman (kuxhomekeke kwingcali yakho) umthetho oqhelekileyo. "Ijuri elikhulu limele lisebenze njengomzimba wabamelwane abanceda urhulumente ngokuzisa abaphuli-mthetho ubulungisa xa bekhusela abangenacala kumgwebo ongalunganga," ngokutsho komThetho woThengi.
Zonke iindawo ezimbini kunye neSithili saseColumbia zisebenzisa amajelo amakhulu ukunyanzelisa, ngokwe-University of Dayton; I-Connecticut kunye nePennsylvania ziye zagcina uphando olukhulu. I-subset yale mibandela, i-23, ifuna ukuba izigwebo ezinkulu zetyala zibe zisetyenziselwa ulwaphulo-mthetho oluthile; I-Texas ilapha kwicandelwana.
Yiyiphi iJury Jury
Ijaji elikhulu liqela labantu, ngokuqhelekileyo likhethwe kwidama elifanayo njengama-jurors , ukuba afungelwe yinkundla ukuva ityala. Ijaji enkulu inamalungu angaphantsi kwe-12 kwaye angabikho abantu abangama-23; kunye neenkundla ze-Federal , inani aliyi kuba ngaphantsi kwe-16 okanye ngaphezulu kwama-23.
Amajuri amakhulu ahluke kwiijaji zamatyala (ezinama-jurors angama-12) kwezinye iindlela ezibalulekileyo:
Ngokungafani namajuri okuvavanywa, amajaji amakhulu angayichaza ngesininzi (esingavumelani) ivoti.
Amajaji amacala acinga ukuba ngaba umntu okhuselayo unetyala okanye unetyala lolwaphulo-mthetho. Ijuri elikhulu liphulaphula ubungqina kwaye ligqiba ukuba umntu makabekwa ityala lolwaphulo-mthetho. Ngaloo ndlela ijaji enkulu inquma isizathu esinokwenzeka, kungekhona "ityala" okanye "ukungabi namacala". Ngokwe-American Bar Association:
Ekubeni indima yesigqeba esiphezulu sinokuthi iqinisekise isizathu esinokwenzeka, akukho mfuneko yokuba ijaji live lonke ubungqina, okanye ubungqina obuphikisanayo. Ishiywe elukholweni olulungileyo lomtshutshisi ukunikela ubungqina obuphikisanayo.
Ngokungafani namajuri okuvavanywa, amajuri amakhulu aqhelekanga aqoke imihla ngemihla. Amaninzi amaninzi aseburhulumenteni ahlala kwidolophu ahlala kanye kuphela ngeveki okanye kabini ngenyanga.
Amajurha amakhulu angasebenzisa amandla enkundleni ukuba bafumane ubungqina be-subpoena (umyalelo) nangona banokumema (angalawuli) amangqina angqina.
Ukuba ufumene i-subpoena kodwa ucinge ukuba akufanele ube ubungqina, okanye ucinga ukuba i-subpoena iyabuza iyintoni "engenangqiqo okanye ixinzezelekileyo," unokufaka ifowuni ukuba uyigqithise inqaku.
Ukuba umane wenqabe ukwenza oko i-subpoena ibuza, unokubanjelwa ekudekeleni komntu (kungekhona kobugebengu). Ukuba ubanjelwe ukulahlwa yimbambano, uya kufakwa uze uvume ukuthobela i-subpoena okanye kude kube sekupheleni kwekota yejaji, nantoni na kuqala.
INgqina Elifanelekileyo Kwinqangi
Kwimeko yokugweba ijaji, abasemagunyeni banelungelo lokucebisa; igqwetha lihleli eceleni kwendlela ekhuselayo enkundleni. Kuphando olukhulu:
Kwinkqubo yesigqeba, ubungqina abanakho ukuba negqwetha lakhe likhona kwigumbi elikhulu lejaji, nangona amangqina angaphazamisa ubungqina babo kwaye ashiye indawo enkulu yegqeba ukudibana negosa labo. Amazwe ambalwa avumele ukuba igqwetha lihambe kunye nommangqina; amanye avumela ukuba igqwetha licebise umthengi wakhe, abanye bavumela nje ugqwetha ukuba ligcine ukuqhubeka.
Uphando lweJury olubanzi luhlanganiswe ekusithekeni; ukuphulwa kweso sifiko kuthathwa njengento yokuchaswa ngokobugebengu kwaye kunokucatshungulwa nokukhusela ubulungisa. Abo bafungelwe ukufihla baquka wonke umntu kodwa ngamangqina: abashushisi, abajongi abakhulu, abathathi-ntatheli beenkundla kunye nabasebenzi beebhala. Iimpawu zamagosa amakhulu zigcinwa ziyimfihlo.
Ngowe-1946, iNkundla Ephakamileyo yakha idale iMigaqo ye-Federal Criminal Procedure, eyenza lula umthetho oqhelekileyo kwaye idibanise i-secretary jury kwi-Rule 6, iigatya (d) kunye (e). Ubonelelo lokuqala olumncinci omele abe khona kwiiseseshoni ezinkulu; okwesibini imiselwe umgaqo-jikelele wokufihla.
Inkundla enkulu yejaji iyimfihlo ngenxa yokuba:
Nabani na ophandwayo akakwazi ukudibanisa namangqina okanye ngokukodwa ukuphazamisa uphando.
I-Secrecy inciphisa amathuba okuba umntu oza kutsholwa uya kusinda phambi kwecala.
Amangqina adibanayo angathetha ngokukhululeka xa amazwi abo angasetyenziswanga uluntu okanye afikelele ekujoliswe kuko uphando.
I-Secrecy ikhusela nabani na onokuthi acaciswe, kodwa ngubani ongatsholwa.
AmaNgqina akafunganga ekusithekeni kwi-Federal judiciary juries, evumela amangqina ukuba aphikise amahemuhemu angqonge ukubonakala kwawo okanye ubungqina phambi kwejaji elikhulu.
Ubude be-Jury Grand
I-"jikelele" yegqeba eliphezulu lombutho unomxholo wexesha eliyintloko leenyanga ezili-18; inkundla inokwandisa eli thuba ezinye iinyanga ezintandathu, ukuzisa ixesha elipheleleyo leenyanga kwiinyanga ezingama-24. I-"ekhethekileyo" yomgaqo-mkhulu wezomthetho unokwandisa ezinye iinyanga ezili-18, ukuzisa ixesha elipheleleyo leenyanga ukuya kwezi-36. Amagama omgaqo-jurise wombuso ahlukahluka kakhulu, kodwa ukusuka kwinyanga ukuya kwiinyanga ezili-18, unyaka ube ngumyinge.
Isifungo sombonisi ngokuqhelekileyo sifana nale, sibonakalisa iingcambu zayo kwimbali:
"Wena, njengomphathi wolu xubusho, ngomzimba weNxweme yase-____, fungela, (okanye uqinisekise) ukuba uya kubuza ngenkuthalo, kunye nokwenyani okwenyaniso, kwimiba enjalo, imiba kunye nezinto oza kunikwa ngazo uhlawulise okanye ufike ngolwazi lwakho, uchukumise inkonzo yenkonzo; isiluleko somntu wonke, kunye nabakho kunye nawe ugcine imfihlelo, ungabonakali bani ngomona, inzondo okanye inkohlakalo, ungashiyi nabani na ongabonakaliyo, ububele okanye uthando, ithemba lokufumana umvuzo okanye inzuzo, kodwa iya kunika zonke izinto ngokwenene njengoko zifika kokwazi kwakho, ngokwendlela enokuqonda ngayo (ngoko kukunceda uThixo.) "
Emva kokuba umshushisi abonise ubungqina, ii-jurors zivotela kwiintlawulo ezicetywayo (i-nyhalamenti), eziye zabhalwa ngumtshutshisi. Ukuba uninzi lwaloo jury lukholelwa ukuba ubungqina bubonisa isizathu esinokubangela ulwaphulo-mthetho, ijaji "ibuyisela" ityala. Esi senzo senza inkqubo yokulwa nobugebengu.
Ukuba uninzi lwabagwebi alukholwa ubungqina lubonisa isizathu esicaleni solwaphulo-mthetho, ukuba "akukho" ivoti kuthiwa "kubuyisela ibhayiseti yokungazi" okanye "ukubuyisela ibhajethi engekho." Akukho matyala olwaphulo mthetho alandela le voti.
Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba ukuphela kophando. Umntu okhankanywayo ukuba enze ulwaphulo-mthetho akakhuselwanga ngumgaqo-siseko owenqatshelwe " umngcipheko ophindwe kabini " kulo mzekelo, kuba lowo mntu "akafakwa engozini" (eyenziwe ukumela ityala).
I-American Grand Jury Foundation
Ngasemva kweNkundla eValiweyo ye-American Grand Jury
ZaseJaliya Grand Juries
School School University of Dayton
Imibuzo ebuzwa rhoqo malunga neNkqubo yeJury
IJury Grand: I-Essay (1906)
ISigqeba soMkhulu seJury
Isiqalo kwi-Grand Jury
Indlela yokukhetha i-Reel 2 Speed ​​Speed ​​Reel
Uhlobo lwe-Epic Literature kunye neengongoma